Yehowa Adansefo ne Ɔsom Afoforo Bom Yɛ Asɔre Anaa?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Croatian Czech Damara Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kachin Karen (S'gaw) Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Mexican Sign Language Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Tswana Turkish Turkmen Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wichi Xhosa Yoruba Zulu
Yehowa Adansefo de, yɛn ani gye ho paa sɛ yɛne nnipa a wɔkɔ asɔre ahorow bɛbɔ Bible mu nkɔmmɔ, nanso yɛne wɔn a wɔne yɛn gyidi nyɛ baako mmom nyɛ asɔre. Bible ka sɛ nokware Kristofo “akeka atoatoam pɛpɛɛpɛ.” Ade titiriw a ama atumi aba saa ne sɛ yɛn gyidi yɛ baako. (Efesofo 4:16; 1 Korintofo 1:10; Filipifo 2:2) Yɛn nyinaa gye di sɛ ɔdɔ, ayamhyehye, ne fafiri ho hia paa. Nanso ɛnyɛ ne nyinaa no no. Yɛn gyidi a yɛwɔ no, egyina Bible mu nokware nimdeɛ so. Sɛ ɛnyɛ saa a, anka yɛn gyidi yɛ kwa.​—Romafo 10:2, 3.
Sɛ ɔsom a ɛsono wɔn mu biara gyidi bom yɛ asɔre a, Bible ka sɛ ɛte sɛ nea wɔretwe kɔndua a ɛmfata. Kɔndua a ɛte saa betumi asɛe Kristoni bi gyidi. (2 Korintofo 6:14-17) Ɛno nti Yesu amma n’akyidifo kwan sɛ wɔmfa wɔn ho nhyɛ gyidi afrafra mu. (Mateo 12:30; Yohane 14:6) Saa ara na Onyankopɔn Mmara a wɔnam Mose so de maa tete Israelfo no mu no, ɔbaraa wɔn sɛ wɔne nkurow a atwa wɔn ho ahyia no mmom nsom. (Exodus 34:11-14) Akyiri yi, nkurɔfo bi kae sɛ wɔbɛboa Israelfo, nanso Israelfo anokwafo no annye saa mmoa no. Sɛ wogyei a, anka ɛbɛma wɔde wɔn ho akɔhyɛ gyidi afrafra mu.​—Esra 4:1-3.
Wɔn a wɔkɔ asɔre foforo no, Yehowa Adansefo ne wɔn bɔ Bible mu nkɔmmɔ anaa?
Aane. Wɔ afe 2020 mu no, Yehowa Adansefo de nnɔnhwerew 1,669,901,531 dii wɔn a wɔkɔ asɔre foforo adanse. Sɛnea ɔsomafo Paulo yɛe no, yɛn nso yɛkɔ asɛnka a, yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛte “nnipa pii” nsusuwii ne wɔn gyidi ase. (1 Korintofo 9:19-22) Sɛ yɛne nkurɔfo rebɔ nkɔmmɔ a, Bible afotu a ɛka sɛ yennya “obu a emu dɔ” mma nnipa nyinaa no, yɛde yɛ adwuma.​—1 Petro 3:15.
Esiane asomdwoe ne nkabom a yɛrehwehwɛ nti, ɛsɛ sɛ yɛne ɔsom afoforo bom som anaa? Wuhu nea Bible ka wɔ asɛm no ho a, ɛbɛyɛ wo nwonwa.
Share Share Yehowa Adansefo ne Ɔsom Afoforo Bom Yɛ Asɔre Anaa?
Yehowa Adansefo Gye Di sɛ Wɔn Nko Ara na Wobenya Nkwa Anaa?